भ्रष्टाचार अनियन्त्रित भएको छ ? | दिशानिर्देश कञ्चन साप्ताहिक
भ्रष्टाचार अनियन्त्रित भएको छ ?
आज नेपालमा भ्रष्टाचार माथिल्लो स्तरबाट भईरहेकोले तल्लो निकायका भ्रष्टाचारीहरुलाई हौसला मिलेको छ । केही पहाडी जिल्लाहरुका जनता ंघरबाट रकम थपेर पनि निर्माण काममा लागेका छन् भने कही सरकारी वजेट काम नै नगरी खाई रहेका छन् । केन्द्रिय स्तरमा अरबौको भ्रष्टाचार भएको सबैले स्वीकारेको छ । चौडा लामो ठुला जहाज खरीदमा व्यापक शंकाका साथ व्यापक भ्रष्टाचार भएको कुरा जनमानसमा फेलिएको छ । त्यसबाट स्थानीय
भ्रष्टाचारीहरुमा हौसला छाएको छ ।
बैतडी पुर्चौडी नगरपालिका १० मा भने खुलेआम भ्रष्टाचार भएको छ । प्रमाणको लागी ल.ई. बमोजिम काम नगरी खानेपानी योजनामा कुनै काम नभई निकासा रकम रु चाल लाख रुपिँया स्वाहा पारेको छ । मेरा पानी मुहान र सार्वजनिक बाटो अवरुद्ध गरेका छन् । सबै रकम समितिका पदाधिकारी र केही उपभोक्ताहरुले रकम खाएको छ भनि ऐ.का जयदत्त अवस्थीको भनाई रहेको छ । हुन पनि हो स्थलगत अध्ययन गर्दा जयदत्तको कुरामा दम रहेको छ । अर्कोतर्फ त्यही वडामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता यस पाली आ.व. २०७५/०७६ पाउने केही व्यक्तिहरुबाट प्रति व्यक्ति रु तिन/तिन हजार वडा सचिवको काम गर्ने प्राविधिक कर्मचारीले लिएको हुँदा रु ८ हजारको भरपाई बनाउने तर रु ५०००० (पचास हजार दिएकोले रु ३००० फिर्ता देउ भनि पीडित व्यक्तिहरु मागिरहे बमोजिम वडा अध्यक्ष र सदस्य जगी अवस्थी निज प्राविधिकलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने बताई रहेको बेला सिधासाधा जेष्ठ नागरिकहरुलाई यसरी नै सरकारी वडा सचिवको काम गर्नेबाट भई रहेकोले निर्वाचित पदाधिकारीलाई नियन्त्रण गर्न धौ धौ परिरहेको छ भने यस्तो अवस्थामा देशको साँझा सम्पत्ति कसरी बच्ला भन्ने चिन्ता जताततै देखिन्छ । यस्ता भ्रष्टाचारीलाई नेपाल सरकारले नियन्त्रण गर्न नसकेकै कारण जेष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, एकल महिलाहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न नसकि बैंक खाता खोल्न लगाई झन दुःख दिएको छ । घरदैलोमा गई भत्ता वितरण गर्न कर्मचारी इमान्दार नभएकाले सरकार निरिह बनेको छ । भ्रष्टाचारमा ठूलो ताकत देखिन्छ ।
← द्वन्द्व पीडितहरुका समस्या ज्यूँका त्यूँ
महिला हिंसा विरुद्धको अभियान →